hamroGaun – Page2– सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
अलविदा देवर बाबु !
त्यो पहाडको कथा थारुहरू बावियो काट्न पहाड उक्लिने चलन छ । लोग्नेहरू पहाड उक्लिएको समयमा स्वास्नीलाई घर लिप्ने, पोत्ने, नुहाइधुवाई र कपाल कोर्न बन्देज हुन्थ्यो । यो प्रक्रिया हप्ता दिन, दश दिन, या पन्ध्र दिनसम्म लोग्ने मानिस सकुशल घर नफर्किदासम्म हुन्थ्यो । किनकी थारुहरूमा पहाड आतङ्क थियो । पहाडमा खोंच, कन्दरा, ढुङ्गा, ओडार, नदी र […]
Posted in: hamroGaun, Sahitya, फ्लयास ब्याक
उपचार सहयोगको लागि लुवार दम्पतीको अपील
मुगु । मुगु जिल्ला, खत्याड गाउँपालिका, बडा नं. ८ निवासी जंग बहादुर लुवार र चैती लुवारको पहिलो सन्तानको रुपमा एक महिना अघि अर्थात् असार ४ गते जन्मेका दिपेश लुवारको जन्मे । बुवा जंग बहादुर र आमा चैतीलाई जन्मजात घाउ भएको सन्तान जन्मिन्छ भन्ने कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था पुग्न घण्टौं लाग्नु, सामान्य सरसल्लाह […]
Posted in: hamroGaun, Jiwan saili, National News
पोखराको सस्तो बजारका स्वरोजगार व्यवसायीमाथि प्रहरीको ज्यादती
पोखरा । खराको सस्तो बजारका स्वरोजगार व्यवसायीमाथि प्रहरीको ज्यादती पोखरा सस्तो बजारका व्यवसायीमाथि प्रहरी प्रशासनले ज्यादती गरेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । वैकल्पिक व्यवस्थाविना विना कारण सस्तो बजारबाट आफूहरुलाई विस्थापित गराउन लागिएको भन्दै सैयौं व्यवसायीहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । शनिबार मध्यरातमा विना सूचना सस्तो बजारलाई सिल गरेपछि स्वरोजगार व्यवसायीहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । पोखराबाट […]
Posted in: Artha Jagat, hamroGaun, mainNews, National News
धुर्मुस–सुन्तलीले हस्तान्तरण गरे ५३ वटा घर मुसहर समुदायलाई
बर्दिबास । महोत्तरीको बर्दिबास–२ मा मुसहर समुदायका लागि निर्माण भएको एकीकृत नमुना बस्ती स्थानीय मुसहर समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) फाउन्डेशनले बनाएको ५३ वटा भवन शुक्रबार अर्थात् नयाँ बर्ष २०७४ सालको सन्दर्भ पारी एक समारोहकाबीच हस्तान्तरण गरिएको हो । हास्य कलाकारद्वय महजोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले एकीकृत […]
Posted in: hamroGaun, Jiwan saili, mainNews, National News
राकम कर्णाली, भर्ता, महावु, ढिपु, गाग्रा दक्षिण पूर्वोत्तर र नाग्म, चुली मालिका, वुडु हुँदै पश्चिम उत्तर फैलिएका दुइटा पहाडको बिचमा जुम्ला अवस्थित छ भने नाग्म, रारालिही, चुलाकोट हुँदै डाँफेलेकतिर फैलिएको पहाडले सिंजा उपत्यका र चौघान उपत्यकालाई छुट्याई दिएको छ । अर्कोतिर कुँडारी, मालिका हुँदै गिरीदह पूर्वदक्षिण फैलिएको पहाडले भेरिखोला र तिला खोलाका बस्तीको रेखा कोरिदिएको […]
Posted in: hamroGaun, mainNews
फेरि उठ्दैछ सुदूरपश्चिम वर्गसंघर्षको विगुल फुक्न
हो, क्रान्तिको एक अथक योद्धा बनेर फेरि उठ्दैछ सुदूरपश्चिम । कैलाशमाथि नागवेली आकारमा लुकामारी गरिरहने पहाडहरु छिचोल्दै गर्दा, सुदूरपश्चिमका गाउँबस्तीहरुमा त्यहाँका जनतासँग उठबस गर्दै जाँदा यस्तै अनुभूतिहरुको तीव्रतामा डुबिरहेको छु म । हिमालबाट बग्ने महाकाली छिचोल्दै गर्दा दार्जुला र डोटीका बस्तीहरुले यही आव्हान गरिरहेका छन्, फेरि उठ्नुपर्छ, क्रान्तिमा जुट्नुपर्छ । महाकाली र साइपाल हिमालबाट बग्ने […]
Posted in: Bichar, hamroGaun, mainNews
‘आइं, आइं, भ्या बे !’
ओई साथी ! बुकी जाने होइन ? रोल्पा, रुकुम र प्युठानका उत्तरी भेगका गाउंहरुमा भेडा पालन निकै गरिन्छ । वर्षा याममा घरआंगनमा प्रशस्त घांस हुने हुनाले भेंडीगोठहरु गाउंमा नै राखिन्छन् । तर हिंउद लागेपछि अग्ला लेकहरुमा भेंडा चराउन लाने गरिन्छ । यी लेकहरुमा भेडीगोठ बनाइएको हुन्छ । कतैकतै ठूल्ठूला ओढारहरु हुन्छन् । यी ओढारमा हजारौं […]
Posted in: hamroGaunLeaveacomment
लिवाङ सङ्घर्षको पर्याय
लिवाङ रोल्पा जिल्लाको सदर मुकाम हो । यो जिल्ला वि. सं. २०१८ सालको नयां भौगोलिक संरचना अनुसार बनेको हो । दाङ, सल्यान र प्युठानबाट केही भूभाग कटाएर यो जिल्ला निर्माण भएको हो । जिल्ला निर्माण हुनुपूर्व यसको अधिकांश भूभाग प्युठान जिल्लामा पर्दथ्यो । हाल एक लिवाङ नगर पालिका र ४९ वटा गाउं विकास समिति रहेको […]
प्युठान एक ऐतिहासिक ठाउं
राप्ती अञ्चलमा पर्ने प्युठानको जिल्लाको बारेमा निकै नै किम्बदन्तिहरु पाइन्छन् । साथै केही ठोस प्रमाणहरु पनि रहेका छन् यो जिल्लाको नामाकरण र स्थापनाको बारेमा । प्युठान आफैमा एक पुरानो र निकै नै स्थापित जिल्ला वा ठाउं पनि हो । कर्नेल कर्कपेट्रिकका अनुसार पूरथानाबाट प्युठान रहन गएको भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ । पुरथाना भनेको प्रार्थना […]
थबाङ एकताको प्रतिक
‘आबुई ! पञ्चायतकालको त्यो जगजगी’ स्थानीयले जीउमा जिरिङ्ग कांढा उमार्ने गरी स्मरण गर्ने र गराउने गर्दछन् आफ्ना सङ्घर्षका ती दिनहरु । कसले सोचेको होस् पञ्चायती निर्वाचन बहिस्कार हुन्छ भनेर । तर भयो त्यस्तै । २०३८ सालको कुरा हो । बालाराम घर्तीमगर र रेगबहादुर सुवेदी माननीयज्युहरु गाउंगाउं पुगे, घोडामा चढेर । खुब डुले । कहिले तल, […]